INetatmo Ikhona khamera yezokhuseleko efanelekileyo kwi-iDevices zethu | IPhone iindaba
INetatmo ikhona eyona khamera yezokhuseleko kwi-iDevices zethu
Sele sikuxelele kumaxesha amaninzi malunga nayo yonke le nto izixhobo esinokuzisebenzisa kunye neeDevices zethu, kwaye kukuba ekugqibeleni ii-iPhones zethu kunye nee-iPads zizixhobo ezihamba nathi kule mihla yethu, kwaye lolona khetho lokulawula zonke ezinye elektroniki esinayo kwikhaya lethu elinengqondo.
Kwaye le yenye yeenjongo ezintsha ze-iOS 10 ngenkqubo entsha yasekhaya, ukwenza iziko lolawulo oluzenzekelayo lokulawula amakhaya ethu kwi-iDevices zethu. Thermostats, switch switchers, okanye neekhamera, zininzi zezixhobo esinokuzilawula ngokuthe ngqo kwizixhobo zethu. Namhlanje sikuzisa ngokuchanekileyo kanye ikhamera yokujonga, isixhobo esitsha ngokupheleleyo onokuyifaka ekhayeni lakho. Emva kokutsiba sikulethela zonke iindaba ze Ubukho beNetatmo...
Ubukho beNetarmo sisixhobo esinomdla kakhulu kuba inokufakwa ngaphandle kweengxaki ngaphandle (nangaphakathi endlwini). Nje ukuba siyifake, ubukho beNetatmo buya kuhlalutya ngexesha lokwenyani ukuba ngaba zikhona Persona kwimeko yendlu yethu, ukuba a umqeqeshi, okanye nokuba ngaba isilwanyana singene egadini yethu. Xa ufumanisa nantoni na engaqhelekanga iya kusithumela isaziso kwi-iPhone okanye kwi-iPad yethu. Uhlalutyo lwenziwe ngenxa I-Smart-Sight, ialgorithm eyenziweyo ngophawu olukwaziyo ukubona zonke ezi "ndawo zikhona".
Ukufakwa kobukho beNetatmo kulula kakhulu, Kuya kufuneka siyifake kuyo nayiphi na indawo yokukhanya esinayo, Ubukho beNetatmo buza kusebenza njengendawo yokukhanya ukusukela ebusuku iya kukhanyisa ukukhanya kwayo okukhokelwayo okunamandla ezakuthi isebenze ekuthothiseni nabani na ongasifuniyo. Yonke ingcaciso iya kugcinwa kwi-microSD okanye kuyo nayiphi na inkonzo yokugcina ilifu, kwaye ngokucacileyo Siza kusebenzisa inethiwekhi yeWifi yekhaya lethu. Sele siyazi ukuba ayisiyonto i-hypersecure, kodwa njengokuthintela kufanelekile. Ungayifumana kwiwebhusayithi yeNetatmo kwezi veki zimbalwa zizayo 299,99 €.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » INetatmo ikhona eyona khamera yezokhuseleko kwi-iDevices zethu
Uyisebenzisa njani iNgcaciso yokumamela kunye nezixhobo zakho zokuva
Isixeko sikaGqirha Hoanda, simahla ixesha elilinganiselweyo